'AmaSulumane Angabafokazi': Umkhankaso WamaNdiya Wokuthola Ingaphakathi LaseNdiya | Ipolitiki
'AmaSulumane Angabafokazi': Umkhankaso Wangaphakathi WaseNdiya Wokunquma Ukuthi Ngubani Isakhamuzi
Isikhathi sokufunda: 5 imizuzu
JORHAT, India - Cishe iminyaka emibili, uMamoni Rajkumari, ongummeli, uchithe izinsuku zakhe enquma ukuthi ngubani oyisakhamuzi saseNdiya futhi ongeyena, njengengxenye yesigungu sokubukeza abasolwa bakwamanye amazwe abasolwa ezweni lase-Assam. Ngemuva kwalokho, uthi, waxoshwa ngenxa yokungamemezeli ngokwanele amaSulumane ukuthi awawona ama-noncitizens.
“Ngijezisiwe, '' kusho yena.
Unksz Rajkumari, 54, uzithole esephambili kwabakwaNdiya izimpi zezakhamizi. Ngaphezu kwezinkantolo, ezisebenza u-Assam amashumishumi eminyaka, umbuso usanda kuqeda obanzi, ohlukile Ukubuyekezwa kwayo yonke imibhalo yabahlali ukubona ukuthi ngabe bayizakhamizi.
Lokho kubuyekezwa kwathola ukuthi cishe izigidi ezimbili zabahlali base-Assam abayizigidi ezingama-33, iningi labo elimpofu kakhulu, kungenzeka ukuthi lalingabafokazi. Manje leli qembu - okuyinto Muslim ngokungakhethi - ayinamandla angenakubalwa.
Kwenzekani e-Assam ukubuka kuqala kokungahle kube kuza e-India njengoba uNdunankulu uNarendra Modi ezama ukudonsa izwe lelo esisekelweni salo njengezwe elingumhlaba, elinamasiko amaningi futhi liliguqula libe yisizwe samaHindu esande ngokweqile.
I-Bay of Bengal
NguNew York Times
INew York Times ixoxisane nelungu elilodwa lamanje kanye nabahlanu ababengamalungu ezinkantolo zase-Assam abukeze abasolwa bakwamanye amazwe. La malungu amahlanu okuqala athi azizwe ecindezelwe nguhulumeni ukuthi amemezele amaSulumane njengabantu abangawenzi umthetho. Abathathu kubona, okubalwa kubo noNkz Rajkumari, bathi badutshulwe ngoba abakwenzanga lokho.
Iziphathimandla zikaHulumeni nohulumeni wenqabile ukuphawula.
Iqembu likaMnu. UMnu Modi usanda kuphika ukuthi unezinhlelo ezinje.
Njengo-Assam, i-India iningi lamaHindu, linengxenye enkulu yamaSulumane. NgoDisemba, uhulumeni wezwe waseNdiya kuphasiswe umthetho omusha wokufika kwabokufika okunikeza ithrekhi esheshayo yokuba yisakhamuzi sabafuduki abangabhalisiwe abavela emazweni aseduze inqobo nje uma bengamaHindu noma enye yezinkolo ezinhlanu. AmaSulumane awafakwa ngaphandle.
Okwenzekile wukuthi noma ngubani ongumHindu ashiya phansi uhlu lwezakhamizi zase-Assam ngemuva kokubuyekezwa okubanzi, noma okumenyezelwe yizinkantolo ukuthi zingabokufika, kungaqinisekiswa njengezakhamizi ngenxa yomthetho omusha wokufika. AmaSulumane kungenzeka.
"Ngokwanda, kubukeka sengathi amaSulumane asebeqondiswa izisulu," kusho uBinod Khadria, uchwepheshe kwezokufuduka futhi onguprofesa waseJawaharlal Nehru University eNew Delhi.
Ngisho nangaphambi kokuba kubuyekezwe izakhamizi, inhlangano yamalungelo abomdabu e-Assam, enyakatho-mpumalanga yeNdiya emngceleni weBangistan, ibilokhu igqugquzela uhulumeni ukuthi axoshe abokufika.
Amaphoyisa - kwesinye isikhathi abambe imibiko yezakhamizi ezizimele - athumele izakhamizi ezingaphezu kuka-433,000 ngokuthi "zingabokufika abasolwa njengakwamanye amazwe," ngokusho kwemibhalo yephalamende, azithumele ezinkantolo ezinjengalowo Nksz. Rajkumari ahlala lapho ezokhipha amadokhumenti noma ofakazi ukuzokhombisa ukuthi umNdiya ngempela.
Manje, ukubukezwa kwesakhamuzi kukhiqize “abantu abasolwa njengabezinye izizwe” abasha abayizigidi eziyi-1.9. Ngakho-ke u-Assam unezela ezinye izinkantolo zakwamanye amazwe ukuze ahlulele amacala abo.
Inqubo yonke yezinkantolo ikhathazekile ngoNks uRajkumari nabanye abasebenze njengamalungu e-Tribunal, imvamisa belalela amacala bona.
AmaNdiya amaningi ahluphekayo awanayo imibhalo edingekayo yokufakazela ubuzwe, njengamarekhodi okuvota kwabazali nemibhalo yobunikazi bomhlaba eqinisekiswe yiziphathimandla njengeyiqiniso.
Ngaphezu kwalokho, ukukhetha ukuthi kubizwa ngubani njengosolwa njengowesinye isizwe kubukeka sengathi kunemibono engokwenkolo kuyo, ngamaphesenti amaningi amaSulumane athunyelwe ezinkantolo kunamaHindu, ngokusho kukaNks Rajkumari kanye namalungu enkantolo. Amanye alawo malungu e-court court nanamuhla abekhuluma ngokungadalulwa ngoba esaba ukuphindiselwa kuhulumeni.
Yize izinkantolo zingazona izinkantolo zobuchwepheshe, zisebenza ngokungathi zinjalo. Uma bethola ukuthi umuntu akakwazi ukufakazela ubuzwe bakhe, lowo muntu angathunyelwa ejele, kaningi ejele.
UKartik Roy, ongummeli nelinye ilungu lekomidi, uthe "iningi lezinkomba '' ezenziwa ngamaphoyisa enkantolo yakhe ukuphenya abasolwa bakwamanye amazwe ukuthi“ babephambana namaSulumane. ”
Uthe ukucindezela kucacile: "Kufanele usho ukuthi 'bangabezinye izizwe' kusho ukuthi kumele nimemezele amaSulumane," kusho yena.
Unksz Rajkumari uvumile, wathi abaphathi bakahulumeni "bacabanga ukuthi amaSulumane angabafokazi."
Amanye amalungu ezinkantolo okwaxoxwa nawo athi azizwa ecindezelekile kakhulu ukuthola “abezinye izizwe” abaningi, enesidingo sanyanga zonke sokubika ukuthi mangaki amacala abawezwile nalawo, ukuthi bangaki abantu abamenyezelwe njengabangaphandle.
Amanye amalungu amabili ake athi izikhulu eMnyangweni Wezasekhaya Nezepolitiki e-Assam, okuthi kusukela ngonyaka ka-2016 zilawulwe yiqembu lezepolitiki likaMnu.
La malungu e-court court athi izikhalazo ezidluliselwe kubona ziyindlela yokucindezela okungaqondile kodwa okunzima.
Amalungu e-Tribunal athi iningi labantu bakwamanye amazwe lisebenze ngokuthi "kulungile," okukhuphula amathuba okugcina imisebenzi, ngokusho kwemibhalo yasenkantolo ebukwe yiThe Times. Ukusebenza kwalabo abangazange bathi abantu banele bakwamanye amazwe kwakubhalwe ukuthi “akwenelisi.”
Womabili la magama kaNks Rajkumari kanye noMnu Roy avele kulolo hlu lokubuyekezwa enenothi elibhalwe amagama abo, bethi "banganqanyulwa."
Yikho kanye okwenzekile. Imibandela kaNks uRajkumari kanye noMnu Roy ayivuselelwanga ngo-2017.
Bobabili bathi ngenxa yokuthi inqwaba yabantu ababephambi kwale nkantolo yayingamaSulumane, okulindelekile ukuthi bazomemezela amaSulumane njengabafokazi, bavimbe indlela yokuxosha, ukubabopha noma ukuthatha amalungelo ayisisekelo.
Umqondisi jikelele wamaphoyisa e-Assam nezinye izikhulu zikahulumeni wenqabile ukuphawula.
UMnu Modi nezikhulu eziphezulu embuthweni wakhe benqabile ukugxila kumaSulumane kuhlolo lwezakhamizi zase-Assam, bethi lokho bekuhloselwe ukukhomba abokufika ngokungemthetho.
UMnyango Wezasekhaya eNew Delhi, ogcina ubhekele imithetho yezakhamizi nezokuhlala eNdiya, nawo wenqabile ukuphawula, ecacisa izidingo zenkinga ye-coronavirus.
Iningi labafuduki e-Assam babevela eBangistan, ngasikhathi sinye noma kwesinye. Abaningi bahlala ku-Assam ezizukulwaneni ngezizukulwane, inzalo yabafuduki bezomnotho abavela emashumini eminyaka adlule.
Futhi abaningi abafundile futhi bampofu, imvamisa abanamqondo wokufunda amaphepha abalulekile ukufakazela isimangalo sezakhamizi, futhi abagweme ukuphuma ejele.
I-Bangladesh, izwe elinamaSulumane iningi labo, nelinye lamazwe ampofu kakhulu futhi omningi kakhulu emhlabeni, iveze intshiseko enkulu ekuthumeleni abokufika emuva.
Ukudlula komthetho wokuba yisakhamuzi ezweni lonke kwagqama imibhikisho e-Assam nakulo lonke izwe, futhi baqhubeka nokuqhakaza kuze kube uMnu. Modi ubeka i-coronavirus i-lockdown ngaphesheya kweNdiya ngasekupheleni kukaMashi.
Inqwaba yabantu e-Assam ubuzwe babo obubuzwe buye bazibulala, ngokusho Imibiko yabezindaba yaseNdiya. Abanye abaningi besaba ukuxoshwa eNdiya noma baphonswe ejele.
Uhulumeni kaMnu. Modi kubukeka sengathi awazakhi izisekelo zokuxosha izigidi zabantu.
Kepha yandisa amandla ayo okufaka abafokazi kwamanye amazwe; omkhulu ukuboshwa Lesi sikhungo sakhiwa esifundeni saseGoalpara e-Assam, lapho kungabanjelwa khona abantu abangaba ngu-3,000.
Ikhompiyutha, okumele ivulwe ezinyangeni ezimbalwa, inezindonga eziwugqinsi, eziphakemeyo ezingxenyeni engaphandle, kumawashi kuwo wonke amakhona, izingxenye ezihlukile zabesilisa nabesifazane nesiguli.
NgoJulayi wonyaka wezi-2017, uNksz. Rajkumari, uMnu Roy namanye amalungu ayishumi nambili ayesenkantolo bamangalela uhulumeni ngokuxoshwa kwabo ngokungafanele, bephikisana nesilinganiso sikahulumeni somsebenzi wabo. Balahlekelwe yicala.
Unksz Rajkumari oqhubeka nokwenza umthetho uthe lokho uhulumeni akumcindezele ukuthi akwenze akulungile. Emasontweni ambalwa ngaphambi kokuba axoshwe, uyakhumbula, wavakashela umama wakhe.
"Ma, ngizowenza kanjani lomsebenzi?" Unksz Rajkumari ukhumbule ukumbuza, izinyembezi zehla ebusweni bakhe. "Ngoba akukho emthethweni kakhulu."
U-Anupam Chakravartty unikele ekubikeni okuvela eGwahati, eNdiya.
Lesi sihloko sanyatheliswa ekuqaleni I-New York Times.
Thumela Previous Kungani udinga ukuvakashela idolobha laseSpain eLepe
Post Next E-Italy, Ukubuyela Emsebenzini Kungancika ekutholeni ama-antibodies afanele
Amamaski weCoronavirus namagilavu ​​abeka ingozi ezikhungweni zokuphinda usebenzise kabusha
Isikhungo esikhulu sokuphinda usebenzise kabusha sePortugal sinenkinga. Abantu abaningi kakhulu baphonsa imaski namagilavu ​​e-coronavirus emigqomeni yokuphinda isebenze, ukuthumela
IMicrosoft isusa izintatheli zegumbi lezindaba ngemishini
Iningi labakhiqizi bezindaba abengamele amawebhusayithi e-Microsoft e-Microsoft bathathelwa indawo yisoftware. Imibiko yabezindaba eSeattle, lapho
I-India yokunciphisa isivalo naphezu kwerekhodi lokutheleleka okusha kwansuku zonke
Phendula ku-Twitter 1266800570997846016I-Retweet ku-Twitter 1266800570997846016Njengo-Twitter 1266800570997846016
Izinkampani ziqala Ukuhlela i-Hong Kong Eksodusi njengezindawo Zomthetho Wokuphepha ZaseChina
Phendula ku-Twitter 1266799780425940993I-Retweet ku-Twitter 1266799780425940993Njengo-Twitter 1266799780425940993
Bika: IChina yaseNyakatho-mpumalanga Ibuyisa Ukuvalwa Kwezindawo ZaseCaronavirus Case Rise
Phendula ku-Twitter 1266799761853538304I-Retweet ku-Twitter 1266799761853538304Njengo-Twitter 1266799761853538304